Umphathi weRealme wabelana ngesampulu yekhamera yasebusuku yeRealme 3 Pro | I-Androidsis
Phambi kokumiliselwa kwe Realme 3 Pro, ecwangciselwe uAprili 22, Umphathi omkhulu wenkampani wabelane ngesampulu yekhamera yasebusuku yesixhobo.
Umfanekiso weHolo yeKhonsathi yaseShenzhen e China iyachukumisa. Inqanaba leenkcukacha liphezulu kwaye ukuveliswa kombala kugqwesileyo. Jonga ukuba ifoto ivele njani apha ngezantsi!
Isampulu yekhamera yasebusuku yeRealme 3 Pro
I-Realme igcine umda oqinileyo kwikhamera yefowuni, kunye nezinye izihloko. Into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku malunga nokuvuza kunye neziphumo zebenchmark, ezinje enye iGeekbench isandula ukukhutshwa.
Kuyatshiwo oko I-Realme 3 Pro inekhamera enye ephambili njenge OnePlus 6T. Ukuba oku kuyinyani, sithetha ngesenzi sensor seSony IMX519. Esi sibonelelo siyakwazi ukuthatha iifoto zesisombululo se-16 MP kwaye ine-f / 1.7 aperture, 1.22 µm pixel size, Optical Image Stabilization (OIS) system and dual LED flash. Ukongeza, isebenze kakuhle kakhulu kwiflegi ye-OnePlus, ekufuneka iqatshelwe ukuba sisiphelo esiphezulu.
Isivamvo esingasemva esingaphezulu seselfowuni siya kuhamba kunye nesesibini sokufaka ulwazi kwisiphumo se-bokeh. Ke ngoko, Sithetha ngekhamera ephindwe kabini ngasemva. Ngokuchasene noko, ngaphambili, inzwa enye yekhamera iya kubakho, eya kuthi ixhotyiswe ngokusebenza kwe-AI, ibonelele ngokuthwebula kakuhle kwaye ibenokusebenzela ukubonwa kobuso nokunye.
Kwelinye icala, kuye kwaqinisekiswa oko iselfowuni nayo iza kuza ne Snapdragon 710, 6GB ye-RAM kwaye iya kuqhuba Android Pie. Ukongeza, iya kuba ne-FullHD + isikrini kunye nenotshi. Ezinye iinkcukacha, ezinje ngexabiso, ziya kwaziwa ngomhla wokunikezelwa kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isampulu yekhamera yasebusuku ye-Realme 3 Pro ityhila ubuchule bayo bokufota